Iindaba-Ungayikhetha njani iSweatha elingana neSilhouette yakho?
Umyalezo woMphathi Jikelele
Iimveliso ezithengiswayo ezishushu
Elinithiweyo iSweta eyunifomu
Umnqwazi onithiweyo, isikhafu kunye neeglavu
Ukwenziwa kweSweatha ezinithiweyo zamadoda
Ukwenziwa kweSweatha eLuniweyo yabasetyhini
Ukwenziwa kweSweatha ezinithiweyo kwaBantwana
KUTHENI UKHETHA WG
Ungayikhetha njani iSweatha ehambelana neSilhouette yakho?
Ngokusisiseko ibandakanya isitayile / ipatheni, umbala, ukuthelekisa, njl.
Akunakunqwenela ukukhetha isitayile sejezi, kufuneka iqale kwiinkcukacha ezinjengomfanekiso, umbala wolusu.Ngokukhetha kwakho ngononophelo, ijezi elula enxibe kuwe inokudlalwa ngokwayo inzuzo.Kukho amanqaku amathathu anokuqatshelwa.Masihambe.
Inqaku lokuqala: Ukukhethwa kweNecklines yeSweatha (IiKhola)
Ekwindla ijezi ngokuqhelekileyo inxibe yodwa, ngoko ke iyona nto ibhetele kakhulu ekukhetheni i-neckline.Ichaphazela imilo yekhola ephezulu okanye ephantsi, okanye i-neckline enkulu okanye encinci, ngaloo ndlela iya kunika abantu impembelelo yokubona eyahlukileyo.Ukugcina i-gap ebonakalayo kwinqanaba lobuhle, ngoko kufuneka siqwalasele ngokubanzi ukuma kobuso, ubukhulu bentamo, njl.
Kwiintambo zentamo, ngokusisiseko kubandakanya: intamo ejikelezayo, intamo yesikwere, i-V-intamo, intamo yentliziyo yenkukhu, intamo yenqanawa, intamo ephezulu / i-turtle intamo.
Icebiso loku-1: Ukugweba ngokweMilo yoBuso
Ubume bobuso bunokwahlulwa njengemifanekiso engezantsi: Iqanda leGoose, isikwere, iDayimane, iMelon, iRound, inde
* IKhola yeSweta yoBuso obuMbhoxo:
Thatha imilo yobuso bukaLiu Yifei, umzekelo, indawo ye-cheekbone yeyona ibanzi, kwaye i-arc ejikelezayo yesilevu iyabonakala; ke olona khetho lubalaseleyo lobuso beqanda leGoose yintamo ye-V, intamo yentliziyo yenkukhu, intamo yesikhephe, umjikelo ophantsi. intamo, intamo yesikwere.Akukho ukukhetha ijezi ye-turtleneck, ngaphandle koko "ubuso obukhulu" buya kubonakala.
** IKhola yeSweta yeSquare Face
Ubuso besikwere bukwabizwa ngokuba ngumlingiswa waseTshayina "国" ubuso.Thatha ubuso bukaLi Yuchun, umzekelo, i-V-neck, intamo yentliziyo yenkukhu, intamo ephantsi ejikelezayo, intamo yesikwele yiyona nto ikhethekileyo.
*** IKhola yeSweta yoBuso obubume beDayimane
Iimpawu zobuso bedayimane ziphezulu xa kuthelekiswa ne-cheekbones.Ukuthatha imilo yobuso bukaZhang Ziyi, umzekelo, ingqiqo ye-3D ivelele ngakumbi, ifakwe phakathi kwebunzi kunye neetempile.Ngoko olu hlobo lobuso kumantombazana lufanelekile kakhulu kwiintamo ze-sweater njenge: I-V-neck, intamo yenkukhu-intliziyo, intamo yenqanawa, intamo yesikwere, intamo ejikelezayo.
**** IKhola yeSweta yoBuso obubume beMbewu yeMelon (ubuso obumbhoxo)
Ukuthatha isimo sobuso bukaTang Yan, umzekelo, ufanelekile kwintamo ye-sweater njenge: i-V-neck, intamo ejikelezayo, intamo ephezulu, intamo yenkukhu, intamo yenqanawa, intamo yesikwere.
***** IKhola yeSweta yoBuso obuRound
Ukuthatha uZhao Liying, umzekelo, ufanelekile kwiintamo ze-sweater njenge: V-intamo, intamo yesikhephe, intamo yesikwere.
****** IKhola yeSweta yoBuso obude
Ukuthatha uLiu Wen, umzekelo, ufanelekile kwiintamo ze-sweater njenge: intamo ejikelezayo, intamo yenqanawa, intamo yesikwere.
Icebiso lesi-2: Ukugweba ngoBubude beNtamo okanye iThick/Mfutshane
Imilo yeKhola yeSweta yeNtamo ende
Amantombazana anentamo ende ubude, ngoko ke zonke zifanelekile kwiikhola ezi-6 (intamo ejikelezayo, intamo yesikwere, i-V-neck, intamo yentliziyo yenkukhu, intamo yenqanawa, intamo ephezulu / i-turtle neck), ngakumbi i-V-intamo kunye nesikhephe. entanyeni, Yena Sui, umzekelo.
Imilo yeSweta yeKhola yeNtamo emfutshane
Amantombazana anentamo emfutshane ayide kakhulu, ngoko ke zonke zifanelekile kwiikhola njengentamo yesikwere, intamo yenqanawa, intamo yenkukhu, intamo ejikelezayo.
Inqaku lesibini: Ukukhethwa kweSweatha Waistline
Umda esinqeni (umlinganiselo wesinqe; umbhinqo), kukho: Uguqulelo oluthe nkqo-cylinder, iSpiral edge-closed version, Fitted-to-the-waistline version, A-shaped version
Inqaku lesithathu: Iingcebiso zokuNxiba iSweatha uwedwa
Ukudibanisa okanye ukudibanisa nejezi
Impahla yokupakisha-impahla kunye neMix-wear
Iinkcukacha zinceda ubuhle
Kuyimfuneko ukutshatisa amatyathanga ejezi, izikhafu zesilika, izikhafu zegauze, iberet, ubucwebe kunye nokunye.
Ixesha lokuposa: Jun-25-2021